Wed, Jul 8, 2020 at 4:14am
शुक्रबार, चैत्र १४, २०७६ साल
भाइबहिनीहरू, आज हामी आफ्नै घरभित्र थुनिएर बसिरहेका छौँ । हामी यसरी किन बसिरहेका छौँ भन्ने कुरा हामीलाई प्रस्ट हुनु जरूरी छ । हामीले यो कुरा राम्ररी थाहा पाउनु पर्छ र हामीले आफ्ना आमा र बाबालाई पनि मैले थाहा पाएको कुरा भनेर सुनाउनु राम्रो हुन्छ भन्ने लागेर तपाईहरूलाई सुनाइरहेको हुँ । भाइबहिनीहरू, आज विश्वका अगाडि भनौँ मानव जातिकै अगाडि ठूलो संकट तेर्सिन..
एजेन्सी । चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोभेल करोना भाइरसले विश्वलाई आतंकित बनाइरहेका बेला चीनमा फेरि अर्को भाइरस देखिएको छ । चीनको युनान प्रान्तमा हान्ता भाइरसबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। चिनियाँ सञ्‍चामाध्यम ग्लोबल टाइम्सले युनान प्रान्तमा एकजनाको हान्ता भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको जनाएको छ । ग्लोबल टाइम्सको खबर अनुसार हान्ता भाइरस संक्रमित व्यक्ति जुन बसमा सवार थिए, त्यहाँ सवार ३२ जनाको परीक्षण..
बुधबार, चैत्र १२, २०७६ साल
काठमाडाैं, १२ चैत । नेपालमा तेस्राे जनामा काेराेना भइरसकाे संक्रमण भएकाे फेला परेकाे छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सागर दाहालका अनुसार बुधबार कोरोनाभाइरसका तेस्रो संक्रमित फेला परेको पुष्टि भएकाे हाे । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पठाइएको नमुनामा पोजेटिभ भेटिएको उनले जानकारी दिए । तेस्रो संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखिएको बताइएको छ । यसअघि चीन र फ्रान्सबाट फर्किएका विद्यार्थीमा कोरोनभाइरसको संक्रमण देखिएको थियो ।..
एजेन्सी, १२ चैत । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको चपेटामा पूरै विश्व परेको छ। बुधबारसम्म यसबाट प्रभावित हुनेको संख्या ४ लाख १७ हजार ५ सय ८२ पुगेको छ भने १८ हजार ६ सय १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमितको संख्यामा अहिलेसम्म चीन नै अगाडि छ भने मृतकको संख्यामा इटालीले चीनलाई उछिनेको छ। चीनमा संक्रमितको संख्या ८१ हजार ५ सय ९१..
काठमाडाैं, १२ चैत। चितवनको भरतपुरस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा मंगलबार बिहान ज्यान गुमाउने युवामा कोरोना भाइरसको संक्रमण नरहेको पुष्टि भएको छ । मृतक वीरगन्जका ३० वर्षीय सन्तोष यादवको रिपोर्ट प्राप्त भएको र रिपोर्ट हेर्दा उनमा कोरोना संक्रमण नभएको देखिएको अस्पतालका प्रमुख तथा प्रवक्ता डाक्टर भोजराज अधिकारीले जानकारी दिए । 'रिपोर्ट आएको छ, रिपोर्टमा कोरोना नेगेटिभ देखियो', अधिकारीले भने, ‘यहाँबाट स्याम्पल लिइएका अन्य तीन..
मंगलवार, चैत्र ११, २०७६ साल
काठमाडौं, ११ चैत। काेराेना संक्रमणकाे आशंकामा तीन बालकलाई कान्ति बाल अस्पतालकाे आइसोलेसनमा भर्ना गरिएकाे छ । उनीहरुलाई आइतबार एकजना र सोमबार दुईजना गरी तीनजना बालक अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको अस्पतालले जनाएको हाे । अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले कोरोनाको आशंकामा आइतबार भर्ना भएका १४ वर्षीय बालक र आज भर्ना भएका बालकहरु क्रमश: साढे चार र चार वर्षका छन् । तीनै जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरेको बताए..
सोमबार, चैत्र १०, २०७६ साल
देशकै एक मात्र सरुवारोग अस्पताल टेकुले चार दिनमा २० शय्याको आइसियू तयार गरेको छ । सय शय्याको टेकुमा चार आइसियू यसअघि नै थिए । अस्पतालका सबै बिरामी अन्यत्र पठाएर बाँकी ९६ शय्यालाई आइसोलेसन बनाइँदै छ । ५ चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न टेकुलगायत चार अस्पताललाई छुट्टै आइसियू तयार गर्न पत्र पठाएको थियो । टेकुमा ४०, पाटन, सशस्त्र र बिपी..
आईतवार, चैत्र ९, २०७६ साल
काठमाडौं, ९ चैत। वीरगञ्जमा एक जनामा कोरोनाको संक्रमण भेटिएको छ । भारतस्थित पटना मेडिकल कलेजले उक्त मानिसमा काेराेनाकाे संक्रमण भेटिएकाे पुष्टि गरेकाे हाे । ६ दिन अघि बिरामीलाई वीरगञ्जको गण्डक अस्पतालले पटना रिफर गरेको थियो । संक्रमित ती व्यापारीले केही दिन अघि घरमा नै बोलाएर चिकित्सकलाई देखाए पछि उनलाई गण्डक अस्पताल लगिएको थियो । यता पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले पनि..
बहराइन, ९ चैत । बहराइनमा तीन जना नेपालीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको छ । बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले शनिबार गरिएको परीक्षणका क्रममा तीन जना नेपालीमा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको जानकारी दिए । संक्रमितलाई अस्पतालमा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ । उनीहरुको परिचय गोप्य राखिएको छ । यस्तै तीन जना नेपालीलाई कोरोनाको आशंकामा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। क्वारेन्टाइनमा राखिएकामा दुई पुरुष र एकजना..
काठमाडौं, ९ चैत । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीसँग जुध्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारिरहँदा हालसम्म नेपालमै गरिएको परीक्षणमा कसैमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छैन । ७ चैतसम्म ५ सय ७९ जनाको कोरोना परीक्षण गएिको थियो । तीमध्ये सबैमा कोरोना नेगेटिभ नतिजा देखिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग ९ सय जनाको कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको उपकरण छ । प्रयोगशालामा हाल दैनिक ५०..
शुक्रबार, चैत्र ७, २०७६ साल
काठमाडाैं, ७ चैत। सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा एक हजारभन्दा बढी आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राख्ने भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण भइहाले उपचारका लागि पूर्वतयारी गरिएको हो । उपत्यकामा १ सय २० वटा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) बेड तयारी अवस्थामा छ । उपत्यकाबाहिर पनि सोहीअनुसारको तयारी गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघ,..
काठमाडाैं, ७ चैत । कोरोना भाइरस सङ्क्रमितका लागि निर्माण गरिएको भरतपुर कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल शुक्रबारदेखि सञ्चालन हुँदैछ । भरतपुरको प्रदर्शनी स्थलमा निर्माण भइरहेको अस्पतालमा ५० बेडको क्षमतामा शुक्रबारबाटै ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले जानकारी दिइन् । ७० बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने तयारी रहेको बताउँदै प्रमुख दाहालले भनिन्, “अहिलेलाई ओपीडी सेवा हुनेछ । त्यसपछि आइसोलेसनको व्यवस्था..
काठमाडौं, ३ चैत । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण विश्वभर आइतबारसम्म एक लाख ६९ हजार ३१६ जना सङ्क्रमित भएको विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट एएफपीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण विश्वभर ६ हजार ५१२ व्यक्तिको मृत्यु भएको बताइएको छ । कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी चीनमा तीन हजार ९९ जनाको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।..
अमेरिका, ३ चैत । अमेरिकामा विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएकाे कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको परिक्षण शुरू हुने भएकाे छ । अमेरिकामा उत्पादन भएको खोपको ‘क्लिनिकल ट्रायल’ अन्तर्गत सोमबार स्वतस्फूर्त रुपमा परीक्षण डोज लिनका लागि तयार भएका व्यक्तिमा खोप दिइने सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् । अमेरिकाको नेशनल इन्स्टिच्युड अफ हेल्थले परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको समाचार संस्था एपीले उल्लेख गरेको छ । सियाटलमा रहेको वासिङ्गटन हेल्थ रिसर्च इन्स्टिच्युडमा परीक्षण हुनेछ..
आईतवार, चैत्र २, २०७६ साल
काठमाडौं, २ चैत चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा आइतवार अपरान्ह दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रबीच भिडियो संवाद भएको छ। चीनको वुहानबाट गत डिसेम्बरमा फैलिएको कोभिड-१९ बाट भारतमा एक साताकोबीचमा दुईजनाको ज्यान गइसकेको छ। भारत र पाकिस्तानसहित सार्कका ८ देशमा अहिलेसम्म कोरोनाका १७८ मामिला पुष्टि भएका छन्। भारतमा सबैभन्दा धेरै १०९ जना कोरोनाबाट..
काठमाडाैं,२ चैत। कोरोना भाइरस (कोभिड-१९ )को सङ्क्रमणबाट बेलायतमा गएकाे २४ घण्टामा थप १० जनाको ज्यान गएको छ । अहिलेसम्म काेराेनाकाे कारण बेलायतमा ज्यान गुमाउनेको संख्या २१ पुगेको बीबीसीले जनाएको छ । बेलायतमा ११ सय ४० जनामा कोरोना सङ्क्रमणकाे पुष्टि भएको छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले कोरोना नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय प्रयासमा भाग लिन स्वास्थ्य लगायत सबै क्षेत्रसँग आग्रह गर्नुभएको छ । यसैबीच अमेरिकाले..
शनिबार, चैत्र १, २०७६ साल
काठमाडाैं,१ चैत। कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा विरानगरस्थित कोशी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका दुई जनालाई बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान रेफर गरिएको छ । कोशी अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. संगीता मिश्रका अनुसार केही दिन अघि मात्र विदेशबाट आएका उनीहरूमा उच्च ज्वरो र रुखाखोकी देखिएपछि धरान रेफर गरिएको हो । कोरोनाको शंका लागेर आईसोलेसन वार्डमा रेफर गरिएको मिश्रले बताइन् ।..
काठमाडाैं,१ चैत। इटालियन क्लब साम्पडोरियाले सिनियर टोलीका ४ खेलाडीसहित क्लबका डाक्टरलाई (कोविड-१९) कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको बताएको छ। सिरी ‘ए’को टोली साम्पडोरियाले शुक्रबार राति एक विज्ञप्ती जारी गर्दै खेलाडीद्वय ओमार कोले, अल्बिन एक्डाल, एन्टोनियो ला गुमिना, मोर्टेन थ्रोस्बी तथा फिजियो एमेडियो बाल्डारीलाई भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि गरेको हो। साम्पोडोरियाले २४ घण्टाअघि मानोलो गाबियाडिनलीलाई कोरोनाबाट संक्रमित हुने सिरी ‘ए’का दोस्रो खेलाडीको रूपमा घोषणा..
३० फागुन, काठमाडौं नोवल कोरोना (कोभिड-१९) भाइरसका कारण साढे दुई महिनामा पाँच हजार भन्दा बढीको ज्यान गएको छ । ३१ डिसेम्बरमा चीनको हुवे प्रान्तबाट सुरु भएको यो भाइरसका कारण शुक्रबार साँझसम्म ३९ देशमा पाँच हजार ८० जनाको मृत्यु भएको हो । १३२ देशमा फैलिएको कोभिड-१९ बाट सबैभन्दा बढी चीनमा ३ हजार १७७ जनाको ज्यान गएको छ । चीन बाहिर मृत्यु हुनेको संख्या..
काठमाडौं, ३० फागुन महामारीको संज्ञा पाइसकेको कोरोना भाइरसका कारण एकपछि अर्को चलचित्रको रिलिज मिति पछि सर्दै छ । यही क्रममा हलिउडको अर्को एक चर्चित सिरिज ‘फास्ट एन्ड फ्युरियस ९’ को रिलिज मिति पनि पोस्टपोन्ड भएको छ । यसै वर्षको मार्च २२ मा रिलिजको तयारीमा रहेको ‘एफ ९’ अब आगामी वर्ष अप्रिल २ मा मात्रै रिलिज हुने भएको छ । कोरोनाको असरले रिलिज मिति..
काठमाडौं, ३० फागुन । के तपाईलाई रुघाखोकी र ज्वरोसँगै छाती दुखेको छ । यदि तपाईलाई त्यस्तो अवस्था देखिन थाल्यो भने कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पनि हुनसक्छ । कोरोना ९कोभिड–१९० भाइरसको संक्रमणको शंका लगेमा तपाईले अब तुरुन्त १११५ नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ । १११५ मा टेलिफोन गरेपछि तपाईले परामर्श समेत लिन सक्नुहुन्छ । त्यस्तै, टोल फ्रि नम्बर १६६००१९७००० समेत फोन गरेर..
बिहिवार, फागुन २९, २०७६ साल
काठमाण्डौ, २९ फागुन चीनले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमणको उच्च बिन्दु पार भएको जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भाइरस सङ्क्रमणको समस्या महामारीको रुपमा फैलिएको घोषणा गरेको केही घण्टापछि चीनले सङ्क्रमणको उच्च बिन्दु पार भएको प्रतिक्रिया दिएको हो । चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका प्रवक्ता मी फङले बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी सङ्क्रमणका नयाँ बिरामी आउने क्रम घटिरहेको जानकारी गराउनुभएको छ । चीनमा महामारीका रूपमा..
काठमाडौं, २९ फागुन । भारतमा पहिलाे पटक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एक जनाकाे मृत्यु भएकाे छ । कर्नाटक राज्यमा कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएका एक जनाको बुधबार मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका हुन् । कर्नाटकमा एक ६९ वर्षीय व्यक्तिको मृत्यु भएको जनाइएको छ । भारतको कर्नाटक राज्य सरकारले कोरना भाइरस महामारी घोषणा गरेको छ। बुधबार कर्नाटकले कोरोना भाइरसको महामारी घोषणा गरेको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका..
काठमाडाैं,२८ फागुन। बेलायतकी स्वास्थ्यमन्त्री नादिन डोरिसलाई कोरोना (कोभिड १९) संक्रमण भएको छ। आफूमा कोरोना संक्रमण भएको जानकारी गराउँदै डोरिसले भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएपश्चात आवश्यक परामर्श लिएर घरभित्रै एकान्तवासमा रहेको जानकारी गराएकी छिन्‌। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डोरिसले आफूसँग नजिक र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका मानिसहरुबारे जानकारी लिने काम भइरहेको पनि उल्लेख गरेकी छिन्। ६२ बर्षीया डोरिसले नर्सबाटै आफ्नो पेशागत जीवन शुरु गरेकी..
सोमबार, फागुन २६, २०७६ साल
काठमाडौं, २६ फागुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गतका आठै मुलुकमा कोरोना भाइरस पुगेको छ। पछिल्लो पटक श्रीलंका र बंगलादेशमा पनि कोरोना भाइरस संक्रिमत बिरामी आइतवार भेटिएका हुन्। नेपालसहित आठवटै देशमा कोरोना भाइरसका बिरामी भेटिए पनि अहिलेसम्म यी आठै मुलुकमा कोही पनि बिरामीको ज्यान भने गएको छैन। चिनियाँ नागरिकको बाक्लो उपस्थिति हुने यी सार्क क्षेत्रका यी मुलुकमध्ये भारतमा सोमबारसम्म कोरोनाका ४३..
आईतवार, फागुन २५, २०७६ साल
एजेन्सी, २५ फागुन चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले विश्व नै त्रसित भएको छ । उक्त भाइरसको भ्याक्सिनको निर्माणका लागी वैज्ञानिकहरु तिव्र गतिमा लागिपरेका छन् । कोभिड १९ का लागि एन्टीबडी निर्माण भइसकेको राष्ट्रिय चिकित्सा उत्पादन प्रशासनले जनाएको छ । उक्त एन्टीबडीले शरीरमा गएर २९ मिनेट भित्र असर गर्ने जनाइएको छ । जियामेन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान कर्ताहरुले शंकास्पद केस, उच्च जोखिममा रहेका..
शनिबार, फागुन २४, २०७६ साल
एजेन्सी, २४ फागुन । हङकङका एक जना कोरोनाभाइरस संक्रमित मानिसका कुकुरलाई समेत कोरोनाभाइरस लागेको पाइएको छ । यस प्रकरणलाई हङकङका स्वास्थ्य अधिकारीले बुधबार पुष्टि गरे । यो घटना मानिसबाट जनावरमा रोग सरेको पहिलो घटना हो । ‘पोमेरियन’ नाम रहेको त्यस कुकुरलाई अघिल्लो शुक्रबार लक्षण देखिएको आशंकामा परिक्षण गरिएको थियो । सुरुमा कुकुरको शरिरको बाहिरी सतहमा मानिसको संक्रमित पदार्थ झरको तर उ आफैमा..
काठमाडौं, २३ फागुन उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले दक्षिण कोरियालाई कोरोनाभाइरसविरुद्धको अभियान सफल रहोस् भनेर चिठी पठाएका छन्। बिहीबार दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति कार्यालय ब्लु हाउसले किमले ‘सान्त्वनाको सन्देश’ चिठीमार्फत् दिएको बताएको छ। चिठीमा किमले दक्षिण कोरियाले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा सकारात्मक सफलता हासिल गर्नेमा उत्तर कोरिया विश्वस्त भएको बताएका छन्। किमले राष्ट्रपति मुन जे इनको स्वास्थ्यबारे आफू चिन्तित भएको बताएको दक्षिण कोरियाली संचारमाध्यमले जनाएका छन्। केहीदिन..
न्युयोर्क, २३ फागुन । कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण ११ मुलुकमा विद्यालय बन्द भएका छन् । विश्वमा तिव्र गतिमा फैलिएकाे काेराेना भाइरसकाे ज्त्रासले विश्वकामा ३० करोड बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका हुन् । युनेस्कोले जारी गरेको तथ्याङ्कअनुसार कोरोनाभाइरसको संक्रमणको डरले विश्वका ३० करोड बालबालिका स्कुल जान सकेका छैनन् । कोरोना संक्रमणका कारण इटलीले देशभरका विद्यालय बन्द गरेको छ । जापानले पनि विद्यालयहरु बन्द गरेको छ..
प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणबारे अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक नै बेखबर
काठमाडौं, १९ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिने भएकाे छ । उनकाे त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिँदैछ । यसबारे सत्तारुढ दल नेकपा र प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइतबार नै औपचारिक जानकारी दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण बारे त्रिवि शिक्षण अस्पतालकै कार्यकारी निर्देशकलाई भने कुनै जानकारी नदिएको देखिएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रेमकृष्ण खड्गाले प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला..
Results 1436: You are at page9of 48